India: Fanakambanana, Fahazoana Orinasa Ary Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2017 17:38 GMT
Nisongadina tao amin'ny vaovao tamin'ity herinandro ity ny nahazoan'ny orinasa Britanika Vodafone tamin'ny vidiny 19 lavitrisa dolara ny orinasa Hutch Essar izay fahefatra lehibe indrindra amin'ny mpamatsy finday ao India. Nanoratra i Om Malik avy ao Gigaom :
Ny vaovao goavana indrindra talohan'ny fakàna ny orinasa Hutch Essar ny nakàn'ny orinasa Anglisy-Nerlandey mpandrendrika vy “Corus” ny Tata tamin'ny vidiny 12 lavitrisa dolara. Sambany teo amin'ny tantaran'ny vondron'orinasa tao India no nisy faovana fanarahana tahàka izany. Tsy nahagaga raha feno ny hafaliana. Kanefa nisy teny kely mampitandrina nosoratan'i Dhiraj Nayyar :
Inty misy fijery hafa momba ny fifanarahana Tata-Corus nentin'i Govindaraj Ethiraj, Indianina mpanao gazety, izay tao amin'ny biraon'ny BBC tamin'ny fotoana nanambaràna ny fifanarahana Tata-Corus. Toy izao ny nosoratany momba ny fijerin'ny vaovao ao Angletera sy Alemaina an'i India:
Nanomboka karazany faharoa an'ilay vavahadin-tseraserany Malayalam (fiteny indianina) ny Yahoo India ary inona no ataon'izareo mba hamenoany ny pejiny? Maka ny votoatin'ireo gazetiboky kely ety amin'ny tranonkala sy bilaogy tsy ankiteny na manome onitra mifandanja ho azy ireny. Mahamenatra!